ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ကာတာသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ် ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာ သံအမတ်ကြီး H.E Mr Hassan bin Mohamed Rafei Al Emadiအား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် ရေးရာဆောင်အမှတ် (I-11) ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပဲတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ သွင်းကုန်မူဝါဒပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပဲမျိုးစုံကဏ္ဍအလိုက် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆွေးနွေး
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပဲတင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ သွင်းကုန်မူဝါဒပြောင်း လဲမှုနှင့် ပဲမျိုးစုံကဏ္ဍ အလိုက် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုအခြေ အနေများ၊ တောင်သူများ စိုက်ပျိုး ထွက်ရှိလာမည့် ပဲများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်သီးနှံ အစားထိုး ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးရန် ကိစ္စများအားပဲစိုက်ပျိုးထွက်ရှိသည့် တိုင်းဒေသ ကြီး၊ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲက နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ဝန်ထမ်းများ စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်
ရုံးလုပ်ငန်းသုံး ကွန်ပျူတာအခြေခံ ကျွမ်းကျင်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇)နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း စွမ်းရည်မြှင့် သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၇)နှင့် (၂/၂၀၁၇)သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည် ၃နာရီ ၁၅မိနစ်တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဌ လာရောက် တွေ့ဆုံ
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အာရှ-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Ms. Victoria Kwakwa ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေး အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အဆိုပါ ၀န်ကြီးရုံး၊ မေခလာ ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
UN, diplomats’ visit to Rakhine postponed
Diplomats request to make the trip on2Oct after bad weather
A planned visit by UN agencies and diplomats to northern Rakhine was postponed due to weather followingarequest from the dean of the Myanmar diplomatic corps yesterday.
45 Hindu corpses cremated
The bodies of 45 slain Hindu villagers were cremated in keeping with Hindu custom yesterday afternoon at the base of the mountain west of Ye Baw Kya village, near where they were found in mass graves.
Department of Social Welfare provides aids to displaced people
Department of Social Welfare, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement provided aids to displaced people in temporary rescue camps in Sittway Township yesterday.
Myanmar Inter-Faith group reacts to State Counsellor’s speech
In reaction to the national speech by the State Counsellor on 19 September, the Myanmar Interfaith Friendship and Unity Group releasedastatement on Wednesday.
Authorities promise to provide food, security to Muslim villagers in Buthidaung
Local authorities negotiatedagroup of Muslim villagers who were on their way to Bangladesh on 27th September, pledging to provide food and security to them if they wish to stay in their villages.
ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး
ဒုတိယအကြိမ် ရုရှား-မြန်မာ အစိုးရအချင်းချင်း ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မရှင် အစည်းအဝေးကို ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့၌ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ကျင်းပရာ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်း ဦးဆောင်၍ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေများ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ရခိုင်ပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အဓိကတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဥပဒေများအား ဆွေးနွေးပွဲကို စက်တင်ဘာလ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီး ဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးကျော်လွင်၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ များ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများ၊ မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် သီးနှံမျိုးစေ့ လက်လီ/လက်ကားအရောင်းဆိုင်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တောင်သူ လယ်သမားများ တက်ရောက်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ မောင်တောဒေသရှိ နှစ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်တွေ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင် ဦးဆောင် သော အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် မောင်တောမြို့ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်ကာလအတွင်း ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြောင်းမဲ့ရက်စက်စွာ ဓားဖြင့်အခုတ်ခံရပြီး အသက်မသေဘဲ ဆေးရုံမှ ပြန်ဆင်းလာသည့် အောင်သပြေကျေးရွာအုပ်စု ရန်ခါစေတီကျေးရွာမှ မြိုတိုင်းရင်းသူ မဦးခင်အား တွေ့ဆုံ၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုကို အသေးစိတ်မေးမြန်းပြီး ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်သည်။
(၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစွမ်းအင်ဝန်ကြီးများ၏ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကျင်းပ
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့၌ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဆက်လက်ကျင်းပသည့် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစွမ်းအင်ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၏ ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများဖြစ်သော (၁၁)ကြိမ် မြောက် အရှေ့အာရှထိပ်သီး အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၄)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဘက် (၃)နိုင်ငံတို့၏ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနှင့် ပထမအကြိမ် အာဆီယံ စွမ်းအင် ဝန်ကြီးများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်အေဂျင်စီတို့၏ ဆွေးနွေးပွဲများသို့ တက်ရောက်သည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ လောကမာရဇိန်သိမ်တော်ကြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရှိ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်နှင့် မြို တိုင်းရင်းသားများအား ရခိုင်ပြည်နယ် တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနက ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ကြသည်။
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ နေရပ်စွန့်ခွာ ပြည်သူများအတွက် အလှူငွေများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက် အာရုံတက်ချိန်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မောင်တော ၊ ဘူးသီးတောင် ၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်နှင့် ကျေးရွာများမှ ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏ နေရပ်များကိုစွန့်ခွာပြီး စစ်တွေမြို့ရှိ ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများတွင် ခေတ္တခိုလှုံလျက်ရှိသည့် ပြည်သူများကို လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်ပြီး နေရပ်စွန့်ခွာ ပြည်သူများကိုကူညီ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး၊ WFP နှင့် World Bank တို့မှ သီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆုံ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Peter Lysholt Hansen က စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး၊ မေခလာခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၏ ရုပ်အလောင်း ၄၅ လောင်းအား မီးသင်္ဂြိုဟ်
လွန်ခဲ့သည့် တစ်လခန့်က ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ သတ်ဖြတ်ပြီး ရဲဘော်ကျ ကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဖက် မီတာ ၁၅၀၀ ခန့်အကွာတွင် မြေကျင်း ၂ ကျင်းအတွင်း၌ မြှုပ်နှံထား သည့် ရုပ်အလောင်း ၂၈ လောင်းနှင့် အရှေ့ဖက် မီတာ၂၀၀ အကွာတွင် မြေကျင်း ၂ ကျင်း၌ မြှုပ်နှံထားသည့် ရုပ်အလောင်း ၁၇ လောင်းတို့ကို သေဆုံးသွားသည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များ၏ ဆွေမျိုးသားချင်း မိသားစုဝင်များ၏ သဘော ဆန္ဒ အလျောက် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရဲဘော်ကျကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက် တောင်ခြေအနီးတွင် ဟိန္ဒူဘာသာ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာနှင့်အညီ မီး သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဦးစီးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဦးစီးကော်မတီနာယက ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဒုအိုးသည်မ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ပြိုင်းတောင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဇင်ခါးမကျေးရွာ၊ ဘိုလီကျေးရွာ၊ ငွေတောင်ကျေးရွာတို့မှ ဘင်္ဂါလီများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ခွာ၊ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း
စက်တင်ဘာ ၂၈ ၊ ၂၀၁၇
မောင်တောမြို့နယ်၊ အလယ်သံကျော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လေယာဉ် ကွင်းကျေးရွာတွင် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်အတွင်းမှ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်မည့် ဘင်္ဂါလီများ ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ မောင်တောခရိုင်နှင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မှ သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားကြေညာချက်ကို ဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (မြန်မာနိုင်ငံ)မှ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူလျက်ရှိ
သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများက အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းနောက် တည်ငြိမ်ရေးနှင့် တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး တာဝန်များကို အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူလျက်ရှိသည်။
သံတမန်များနှင့် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် ရာသီဥတု အခြေအနေနှင့် သံတမန်အဖွဲ့ အကြီးအကဲ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင်သွားရောက်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသသို့ နိုင်ငံခြားသံတမန်များနှင့် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် လေယာဉ်ဖြင့် စစ်တွေမြို့မှတစ်ဆင့် သွားရောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ရာသီဥတု အခြေအနေနှင့် သံတမန်အဖွဲ့ အကြီးအကဲ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြောင့် သွားရောက်နိုင် ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒဿမအကြိမ်မြောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဆိုင်ရာ အာဆီယံအစည်းအဝေးအတွက် နိုင်ငံအဆင့် သုံးပွင့်ဆိုင် အကြိုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် International Labour Organization - ILO တို့ ပူးပေါင်း၍ ဒဿမအကြိမ်မြောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများဆိုင်ရာ အာဆီယံအစည်းအဝေးအတွက် နိုင်ငံအဆင့်သုံးပွင့်ဆိုင် အကြိုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ သင်္ဂဟဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။
တက္ကသိုလ်အကြံပေးအဖွဲ့များ၊ တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အဖွဲ့များ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၅/၂၀၁၇) ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း အကယ်ဒမီ (Civil Services Academy-CSA) များ၏ တက္ကသိုလ်အကြံပေးအဖွဲ့များ၊ တက္ကသိုလ်ပညာရပ်အဖွဲ့များ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး (၅/၂၀၁၇) ကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီခွဲတွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (၁) ၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိမ်း တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 5:43 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ညောင်ရွှေမြို့နယ်နှင့် ပင်းတယမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် နေ့လည်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနမှူးတို့နှင့်အတူ ညောင်ရွှေမြို့နယ်ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိကာ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ညောင်ရွှေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှူးက ဆေးရုံနှင့်ပတ်သက်၍ အထွေထွေ ရှင်းလင်း တင်ပြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောက်ရွက်ပေးသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအား ကုသရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများအား ကုသရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိရောက်စွာအကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီက နေပြည်တော်ရှိ Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မူးယစ်ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် မူးယစ်ဗဟို အောက်ရှိလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်သည်။
(၁၁) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ခွေးရူးရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 4:54 PM No comments:
Amyotha Hluttaw Deputy Speaker U Aye Tha Aung received Country Director Mr. Kelly Stevenson from Plan International Myanmar yesterday at the Amyotha Hluttaw building in Nay Pyi Taw.
7th Waxing of Thadingyut, 1379 ME
U Soe Aung has been appointed as Deputy Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement in accordance with Section 234, subsection (a), (d) of the Constitution of the Republic of the Union of Myanmar and provisions under Section 16 (b) subsection9of the Union Government Law.
Humanitarian aid donated by the Red Cross Movement were delivered to local people taking shelter at monasteries in Sittway.
Stimulant tablets seized
Stimulant tablets were seized at 16-mile Kyauk Chaw inspection gate in Patheingyi Township, Mandalay Region on Tuesday.
Security force members and Hindu people search missing Hindu villagers
Security forces and volunteers continued to search on 26 September for missing Hindus, but 48 missing Hindu people of Ye Baw Kya village were not found yet. Moreover, additional 144 Hindu people of Ohh Htain village are also reported for missing.
Two Media Men Who Hit Land of Bangladesh
“Situations are no longer in good favour. When I am not online, call me. My number is 09450219800.”
163 killed, 91 missing from9Oct to 26 Sept in N-Rakhine
Thirty patients were confirmed with H1N1 infection among 116 suspected patients who received laboratory test from2to 13 September, withasingle fatality, according to Ministry of Health and Sports.
Of the 93 missing Hindus from Yebawkya Village in northern Rakhine State, the remains of 45 were discovered inamass grave and 25 were identified by the leader ofaHindu assistance group and Yebawkya villagers.
The search continues recover the remaining missing Hindus.
Redevelopment of Maungtaw region as per Disaster Management Law – Dr Win Myat Aye
Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement Dr Win Myat Aye said after the damages and losses caused by ARSA extremist terrorists, redevelopment of Maungtaw region will be implemented according to Natural Disaster Management Law.
Housing project for squatters in satellite towns
Yangon Region government is planning to drawahousing project for the squatters in satellite towns, according toareport in the Myawady Daily yesterday.
PARLIAMENTARY meetings will be resumed on 17th October 2017, according to an announcement of the parliament (Hluttaw) yesterday.
People stagedapeaceful demonstration in Sittway yesterday for the Government to take action in accordance with the law against the ARSA for their terrorist attacks.